Ny vidin'ny angona be loatra | Martech Zone
Ny vidin'ny angona be loatra
Friday, May 31, 2013 Alakamisy, May 30, 2013 Kelsey Cox
Isan'andro, 2.5 data bytes quintillion dia noforonin'ny orinasam-barotra sy varotra. Na dia mitahiry be aza ny angona angon-drakitra amin'ny fanantenanao hahita fomba fiasa azo tsapain-tanana toa ny fampiasana mahomby ny fotoana sy ny volan'ny orinasa, dia mety hahagaga anao ny vola lany amin'izany.
A recent Sary torohay noforonin'i Milina Lattice manambara izany 88% amin'ireo ekipa mpivarotra no tsy mahazo manao raharaham-barotra noho ny tsy fahampian'ny fampahalalana. Amin'ireo nohadihadiana, 24.5% no nahatsapa fanamby tamin'ny angona ary ny fotoana ilaina amin'ny fikarohana, raha ny ambiny amin'ireo valinteny kosa dia tsy ampy fitaovana na tsy liana amin'ny fikirakirana tsara ny firoboron'ny data.
Ho fanampin'ny tsy fahampian'ny ampy paikady data lehibe, mitahiry sy mamakafaka vaovao raha ny marina niaritra orinasa lehibe vola. Ny repte mpivarotra mahazatra dia mandany salan'isa 4 ora / herinandro amin'ny fanomanana fivarotana, ary miaraka amin'ireo solo-barotra iray tapitrisa any Etazonia ankehitriny, dia mitentina $ 50 miliara isan-taona izany.
Ity misy fandinihana lalina kokoa momba izay nahitan'i Lattice:
Tags: lehibepaikady data lehibeDataangona fitehirizanaSary torohaytetika
Rahoviana ny olona no misoratra anarana amin'ny tranonkala webinar?